Ngabe ufuna umakhi we-tin? Njengoba kunabakhiqizi bezitini abaningi abakhiqizi eChina, ukukhetha eyodwa kungaba ngumsebenzi owesabekayo. Noma ungasesha umenzi online, kunzima ukuthola ukuthi ngabe bathembekile noma cha. Njengoba kube nokwanda ezinkampanini zenkohliso, udinga ukuqaphela kakhulu lapho ukhetha umenzi.
Ngabe udidekile ukuthi ungamthola kanjani umenzi ophuma eChina? Lokhu okuthunyelwe kuyisiqondiso sokukusiza ekutholeni umakhiqizi wamathani athenjiwe nathembekile.
Enye yezinto zokuqala okudingeka uzenze ukubona idumela kanye nesipiliyoni senkampani ye-tin can. Uma inkampani sekuphele iminyaka eminingi ikhona, lokhu kubonisa ukuthi inkampani inolwazi futhi ingahlinzeka ngemikhiqizo esezingeni. Noma kunjalo, akufanele uncike kuphela kulwazi. Kufanele ugxile kudumela lenkampani futhi. Ungafunda ukubuyekeza ku-inthanethi ukubheka ukuthi athembekile yini noma cha.
Bona ikhathalogi Yomkhiqizo
Enye into okufanele ugxile kuyo uhla lwemikhiqizo abanikezayo. Kufanele ubheke ukuthi ngabe bayanikela yini amathini wamathile owadingayo. Umkhiqizi omuhle uzoba nohlu olubanzi lwemikhiqizo.
Inani Nenani Elincane Lama-Order (MOQ)
I-MOQ nentengo kuyizinto ezibalulekile okufanele uzicabangele uma ufuna umenzi onokwethenjelwa. Kufanele uthintane nomakhi futhi ubuze ngamanani emikhiqizo. Lokhu kungenxa yokuthi abakhiqizi abaningi basho intengo ephansi yemikhiqizo ukuheha amakhasimende amaningi. Intengo yangempela yemikhiqizo iphakeme kunalena eshiwo. Ngakho-ke, akunandaba ukuthi kukhulunywa ngamanani, kufanele ubuze abakhiqizi ngentengo.
Ngokuqondene ne-MOQ, kufanele wazi ukuthi kungaxoxiswana ngakho. Ukwenziwa kuvame ukusetha usayizi ofanele we-oda. Bazokwehlisa usayizi we-oda ukuthola ama-oda kuwe. Khumbula, i-MOQ ephansi isho intengo ephakeme yocezu ngalunye.
Enye into ebaluleke kakhulu okudingeka ukuthi uyihlole ilayisense lebhizinisi lenkampani. Muva nje, uhulumeni waseChina wethule uhlelo oluku-inthanethi lokunciphisa isibalo sezinkampani ezikhohlisayo. Lokhu kuzonikeza amandla abantu abafuna izinkampani futhi babheke ukuthi zibhalisiwe noma cha. Uzodinga nje igama labo nenombolo yokubhalisa.
EChina, abakhiqizi bomkhiqizo ofanayo batholakala endaweni efanayo yezimboni. Isibonelo, indawo yakwaShenzhen yaziwa ngamadivayisi kagesi. Ngakho-ke, itini likwazi ukukhiqiza lizotholakala lapho kutholakala khona imboni ye-tin.
Ekugcineni, lapho ufuna umenzi omuhle nothembekile waseChina, Shenzhen YiCheng Industrial Co Ltd igama ongethembela kulo. Sinezinhlobonhlobo zamathini amathini angasetshenziselwa izinhloso ezahlukahlukene. Noma ngabe ufuna ukugcina isidlo sasemini noma amamojithi wezingane zakho, sinakho konke. Ungathola ngisho nesitsha sethini sokugcina imikhiqizo yakho yezimonyo. Uma ufuna ukuthola eminye imininingwane, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi
November 7, 2018 /0 Amazwana/by acslock
https://www.tincanpacking.com/wp-content/uploads/2019/11/PET-bucket-for-food-1.jpg 500 500 acslock https://www.tincanpacking.com/wp-content/uploads/2019/11/favicon-1-300x60.png acslock2018-11-07 08:42:092019-11-27 08:52:13Ungayithola Kanjani I-Tin Ethembekile Yomkhiqizi eChina?
Amabhokisi we-Round Tin
Ithreyi, Ibhakede, Coaster, Isiginali ye-Tin
Amabhakede e-PVC (PET)
DVD Tin Ibhokisi, i-CD Amathini
Isipho, Amathikithi Okuphromotha
Ipensela, Amathenisi wezinto zokubhala
Amathini Amathoyizi, Imali Nemali